အမျိုးသမီးအဖွဲ့၏ ၀ယ်လိုအားနှင့် သုံးစွဲမှုအဆင့်မြှင့်တင်မှု လမ်းကြောင်းသည် အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုနှင့် အလှကုန်နယ်ပယ်တွင်သာမက ဂျယ်လက်သည်းဆိုးဆေးလုပ်ငန်း၏ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလည်း အားပေးအားမြှောက်ပြုပါသည်။မကြာသေးမီက လန်ဒန်ရှိ စက်မှုသတင်းအချက်အလက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် ReportByuer...
လက်သည်းပန်းချီလုပ်ငန်းရှိလူများသည် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော လက်သည်းဆိုးဆေးဂျယ်လ်သည် လက်သည်းပန်းချီနည်းပညာနှင့် တူညီကြောင်းသိကြသော်လည်း လက်သည်းဆေးကော်သည် လက်သည်းပန်းချီဆိုင်များကဲ့သို့ မညီမညာဖြစ်နေသောကြောင့် လက်သည်းပန်းချီဆိုင်များတွင် ရွေးချယ်စရာများရှိလာပါသည်။ဒါဆို ဘယ်လို လက်သည်း UV gel က ကောင်းလဲ?လက်သည်း ဂျယ် တံဆိပ် တော်တော်များများ သုံးကြတယ်...
လက်သည်းခြေသည်း လိမ်းဆေးကို ဘယ်လိုသုံးရမလဲ။
21-09-04 တွင် admin မှ
လက်သည်းခြေသည်း လိမ်းဆေးကို ဘယ်လိုသုံးရမလဲ။Gel Nail Art ဟာ မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းတော်တော်များများ စိတ်ဝင်စားတဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ လက်သည်းကို ပိုလှပစေနိုင်တဲ့ လက်သည်းဆိုးဆေး ပုံစံများစွာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့် Extension gel ကိုသုံးတဲ့အခါ Base coat gel ကို အရင်လိမ်းဖို့ လိုပါသလား။ဘေ့စ် လိမ်းဖို့ လိုပါသလား...
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၊ လက်သည်းဆိုးဆေးသည် ၎င်း၏ပုံစံအမျိုးမျိုး၊ ရေရှည်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှု၊ အလွန်ကောင်းမွန်သော ဖယ်ရှားနိုင်မှု၊ တောက်ပမှုမြင့်မားမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော ထုတ်ကုန်ဖော်မြူလာများကြောင့် လက်သည်းဆိုးဆေးသည် ထိပ်တန်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ဒါပေမယ့် တစ်ခါတရံမှာ လက်သည်းဆိုးဆေးဆိုးဖို့ အချိန်နဲ့ ငွေအနည်းငယ်ယူရပါတယ်..။
လက်သည်းဆိုးဆေး ထုတ်ကုန်များအကြောင်း ပိုမိုသိရှိရန်
Nail gel polish ၏ဖွဲ့စည်းမှုမှာ acrylate၊ phenylactone၊ အော်ဂဲနစ်ဆိုးဆေးများ၊ အစပြုသူများ၊ စသည်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် အဆိပ်မရှိ၊ အရသာမရှိသည့်အပြင် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လည်း သဟဇာတမဖြစ်ပါ။လက်သည်းဆိုးဆေးဂျယ်၏ ကုန်ကြမ်းသည် အဆိပ်အတောက်မရှိ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်ပြီး ဘေးကင်းသော အလင်း- curing resin မှ ဆင်းသက်လာကာ အများအားဖြင့် အားသာချက်ရှိသည်...
လက်သည်းပန်းချီ လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အားဖြည့်လိမ်းဆေးနှင့် အပေါ်ထပ် ကုတ်ဂျယ်ကို အသုံးပြုရန် အဆင့်များ
① primer (base coat gel) ၏ အခန်းကဏ္ဍ- လက်သည်းများကို ကာကွယ်ရန် ပွတ်ထားသော လက်သည်းမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် primer ကို လိမ်းပါ၊ လက်သည်းဆိုးဆေးကို တိုက်စားခြင်းမှ ခွဲထုတ်ကာ လက်သည်းပေါ်ရှိ လက်သည်းဆိုးဆေး၏ ကပ်ငြိမှုကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ကော်အဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။② အားဖြည့်လိမ်းဆေး၏ အခန်းကဏ္ဍ- လက်သည်းအားဖြည့်လိမ်းဆေးသည် နက်ရှိုင်းမှုတစ်ခုမဟုတ်ပေ။
လက်သည်းဆိုးဆေးအမျိုးအစားများ (ဘာဘီကော်၊ QQ လက်သည်းဆိုးဆေး)၊
21-08-07 တွင် admin မှ
လက်သည်းဂျယ်ဆိုးဆေး အမျိုးအစားများ (ဘာဘီကော်၊ QQ လက်သည်းဆိုးဆေး) များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်- ၁။ အရောင်အသွေး ခိုင်မာသော လက်သည်းဂျယ်ဆေး (သန့်စင်သော အရောင်ဆိုးလက်သည်းဆိုးဆေး) ၂။ ရောင်စုံဂျယ်လက်သည်းဆိုးဆေး ( sequin လက်သည်းဆိုးဆေး) 3. တောက်ပသော လက်သည်းဆိုးဆေး (Fluorescent nail gel polish) ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်အောက်တွင် အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး တောက်ပနေလိမ့်မည်) 4. တောက်ပသော ge...
Nail gel polish Art နည်းပညာများ
ကြိုးကိုဆွဲတဲ့အခါ သင့်လက်ရဲ့ ကြံ့ခိုင်မှုကို ထိန်းထားဖို့ လိုပါတယ်။လက်ကောက်ဝတ်ကို ပြင်ဖို့ နေရာရှာပြီး မလှုပ်ပါနဲ့။လက်သည်းဆိုးဆေးကို ပုံဆွဲဘောပင်ဖြင့် သင့်တော်သောပမာဏကို နှစ်ပြီး သင်နှစ်သက်ရာပုံစံကို ဆွဲပြီး ပြီးပါပြီ။လူတော်တော်များများက အိမ်မှာနေရင်း လက်သည်းပန်းချီလုပ်ရတာကို ကြိုက်ကြတယ်...
Base coat gel အစား top coat gel သုံးလို့ရလား?
Base coat gel မရှိရင် top coat gel အစား top coat လိမ်းလို့ရပါတယ်။Base coat နှင့် top coat နှစ်ခုလုံးသည် ဖောက်ထွင်းမြင်ရသည့် လက်သည်းဆိုးဆေးဖြစ်ပြီး texture နှင့် ဆင်တူပြီး ၎င်းတို့သည် လိမ်းပြီးနောက် အလွန်ခိုင်ခံ့သောကြောင့် သင့်တွင် base coat gel မရှိပါက၊ ၎င်းကို top coat ဖြင့် လုံးဝအစားထိုးနိုင်ပါသည်။ဒါမှမဟုတ် မင်း...
ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော တိုးချဲ့လက်သည်းပြုလုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး
21-07-20 ရက်နေ့တွင် admin မှ
လက်သည်းရှည်များအတွက် extension nail gel ကို ဘယ်လိုသုံးမလဲ။1. လက်သည်းမျက်နှာပြင်ကို သဲဘားဖြင့် အလျားလိုက် ကြိတ်ချေပြီး သန့်စင်ပြီးနောက် PH Balance အရည်ကို အသုံးပြု၍ လက်သည်းမျက်နှာပြင် အဆီများကို ဖယ်ရှားကာ primer အလွှာကို လိမ်းပါ။မျှတသောအရည်ကို အဘယ်ကြောင့် အသုံးချရန် လိုအပ်သနည်းဟု မေးနိုင်ပါသည်။လက်ကျန်အရည်သည်...
လက်သည်းဆိုးဆေးနဲ့ လက်သည်းဆိုးဆေး ကွာခြားချက်က ဘာလဲ။
လက်သည်းဆိုးဆေးနဲ့ လက်သည်းဆိုးဆေး ကွာခြားချက်က ဘာလဲ။ယနေ့ လက်သည်းလုပ်ငန်းသည် ဆက်လက်တိုးတက်နေပြီး လက်သည်းထုတ်ကုန်များကိုလည်း အဆင့်မြှင့်တင်လျက်ရှိသည်။ဒါကြောင့် လက်သည်းဆိုးဆေး နဲ့ လက်သည်းဆိုးဆေး တံဆိပ်အမျိုးမျိုးကို တွေ့လာရပေမယ့် လက်သည်းချစ်သူ တော်တော်များများကတော့ နားမလည်ကြသေးပါဘူး..။
base cost gel နဲ့ top coat nail gel ပါ။
အောက်ခံအင်္ကျီနှင့် လက်သည်းပန်းချီ၏ အပေါ်ထပ်အင်္ကျီကြား ခြားနားချက်မှာ- မတူညီသော လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ အသုံးပြုမှု မတူညီသော နည်းလမ်းများနှင့် အသုံးပြုမှု ကွဲပြားသည်။တစ်ခုမှာ, အခန်းကဏ္ဍကွဲပြားခြားနားသည် 1. Nail art base coat gel သည် transitional effect.အဓိကအားဖြင့် လက်သည်းများကို ကာကွယ်ရန်နှင့် လက်သည်းဆိုးဆေးများကို ခွဲထုတ်ရန်...
<< <ယခင်123456နောက်တစ်ခု >>> စာမျက်နှာ ၂/၈